Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay heshiiska Mucaaradka iyo dowladda Liibiya | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay heshiiska Mucaaradka iyo dowladda Liibiya
Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay heshiiska Mucaaradka iyo dowladda Liibiya
Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in dowladda federaalka ay taagereyso heshiiska ay gaareen dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya, gaar ahaan mucaaradka iyo dowladda dalkaasi.
Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in shacabka Liibiya ay dan ugu jirto midnimada iyo wadajirka, loona baahan yahay in lasi waddo wadahadallada.
“Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si weyn u soo dhoweyneysa “is afgarad muhiim ah” oo ay ku dhawaaqday Dowladda Heshiiskii Qaranka ee Dawladda Liibiya iyo Golaha Wakiillada bishii Agoosto 20″ ayaa lagu yiri Warka dowladda.
U jeedada ayaa ah xabbad-joojin deg-deg ah, joojinta dhammaan hawlgallada millatari ee dhammaan dhulalka Liibiya, iyo in la dhaqaajiyo geeddi-socodka siyaasadeed ee waddanka si loo gaaro. Xal waara oo rasmi ah oo lagu soo afjaro dagaalka iyo iskahorimaadka, iyo in la helo nabadgelyo iyo xasillooni loogu sameeyo dadka walaalaha ah ee reer Liibiya.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa bayaankan inuu yahay tallaabo sax ah oo wax ku ool ah oo loo qaaday jihada saxda ah, waxayna ugu yeereysaa dhammaan qeybaha kala duwan ee Liibiya inay u hoggaansamaan una fuliyaan dhulka si loo ilaaliyo midnimada iyo dowladnimada loona wada shaqeeyo wadajirka iyo wada noolaanshaha gargaarka Qaramada Midoobay ee ku xiritaanka bogagga muranka iyada oo la oggolaado isafgarad” ayaa mar kale lagu yiri Warka dowladda.
Maqaal horeBooliska Galmudug oo gacanta ku dhigay Qamri fara badan+Sawirro
Maqaal XigaMas’uul ka tirsan HirShabelle oo is-casilay & sababta ka dambeysa